विर्तामोडको फोहोर व्यवस्थापन : ‘विषय मेजर, बुझाई माइनर’ - Janaandolan
Homeबिबिधविर्तामोडको फोहोर व्यवस्थापन : ‘विषय मेजर, बुझाई माइनर’
शिक्षा, स्वास्थ्य, ब्यापार, रोजगार एवं यातायातका हिसावले विर्तामोड सुविधासम्पन्न मानिन्छ । भारत तथा तेस्रो मुलुकसंगको ब्यापारिक सम्बन्ध, आवासका लागि सुरक्षितस्थल मानिने बिर्तामोडको साइनो पूर्वी पहाडसंग पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ । पहाडमा उत्पादित कृृषिजन्य सामग्रीको विक्री तथा भण्डारण केन्द्र र पहाडको आवश्यकता आपूर्तिस्थलका रुपमा रहेको बिर्तामोड पूर्व क्षेत्रकै आकर्षक केन्द्र एवं हरेक मानिसको रोजाइको स्थल पनि बनिरहेकै छ । पूर्वकै आकर्षक केन्द्रका रुपमा रहेको विर्तामोड सुविधा सम्पन्न भएपनि बढ्दो जनघनत्वसंगै उत्पादित फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा शहर बेलाबेलै दुर्गन्धित बन्छ। शहरमा फैलिएको दुर्गन्धले प्रत्येक मानिसको स्वास्थ्यमा चुनौति पनि थपिरहेको छ।
राज्यको पुनसंरचनापछि स्थानीयतहको निर्वाचन भएको पाँचवर्ष पुग्नै लागेको छ । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको यो अवधिमा पनि फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन व्यवस्थापन किन हुन सकेन ? यसै विषयमा विर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद दाहालसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :
फोहोर व्यवस्थापनका लागि के पहल हुँदैछ ?
गत भदौमा राष्ट्रिय राजनीतिमा मान्यता प्राप्त यहाँ क्रियाशील दलका प्रतिनिधिसहितको एउटा समिति बनेको छ । उक्त समितिले ल्याण्डफिल्डका लागि कता–कता जमिन हेर्ने काम गरेपनि ठोस काम हुन सकेको छैन ।
– समितिले १० दिनभित्र सिफारिस गर्ने भन्ने हल्ला थियो जग्गा सिफारिस भयो ?
खासमा भन्ने हो भने यहाँ फोहोर व्यवस्थापन प्राथमिकताको विषय बन्न सकेकै छैन । यो तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्या हो । तर, विसर्जनस्थलको अभावले सडक किनारामा फोहोर थुप्रिदै आएको छ । केही ठाउँमा ल्याण्डफिलका लागि जग्गा हेरेपनि ती क्षेत्रमा अवरोध देखिएको छ । विर्सजनस्थल उपलब्धताका लागि नगरपालिकाले असोज २ गते १५ दिनको म्याद राखेर सार्वजनिक सूचना पनि गरेका छौं । खोज अध्ययन तथा सिफारिस समिति नामक उक्त समिति गठन भएपछि एकपटक बैठक बस्यो । नगरमा गठित वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समिति संयोजक तथा वडा नंं–४ का वडाध्यक्ष कुलप्रसाद संग्रौलासहित अरु जनप्रतिनिधिहरु पनि कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । अब त्यो सकिएको छ । अब समितिले पनि केही काम पक्कै गर्ला । हामी नगरपालिकाका तर्फबाट पनि प्रयास गरिरहेका छौं । गठित समितिका सम्बन्धमा यति नै दिन भने समय तोकिएको थिएन ।
– विर्तामोडमा दैनिक कति फोहोर उत्पादन हुन्छ ?
नियमित फोहोर नउठेका कारण यत्ति नै भन्न सक्ने अवस्था त छैन । फाल्ने ठाउँ अभावमा नियमित फोहोर उठाउन सकिदैन । विर्तामोड क्षेत्रमा दैनिक कति फोहोर उत्पादन हुन्छ भन्ने चाहिं अनुमानकै भरमा भन्नुपर्ने हुन्छ । सरदरमा दैनिक १० ट्रयाक्टर जति होला ।
–फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीयबासी कतिको सचेत छन् ?
यो मूल्याङ्कन गर्नका लागि पहिले नगरले नियमित रुपमा फोहोर उठ्ने वातावरण बनाउनु पर्यो अनि मात्र भन्न मिल्छ । अहिले त हामीले नै सडकमा फोहोर फाल्ने अवसर दिइरहेका छौं । दीर्घकालीन फोहोर बिसर्जन गर्ने ठाउँ भएपछि फोहोरलाई ग्रेडिङ कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा जनचेतनाको पनि आवश्यकता छ ।
– मुख्य समस्या ल्याण्डफिल्डको कि ! उठाउने ?
समस्या ल्याण्डफिल्डको नै हो । समस्या ल्याण्डफिल्डको नै हो । फोहोर विसर्जनस्थलको व्यवस्थापन मेजर विषय नबन्दा समस्या भएको हो । यो विषय मेजर थियो, बुझाई माइनर भयो ।
– फोहोर उठाउनका लागि मात्र काठमाडौंको संस्था समक्ष पुग्नुपर्ने के बाध्यता थियो र ? भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नी !
फोहोर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गरिएका विभिन्न ठाउँका अभ्यास हेर्दा सरकारी निकायबाट मात्रै भएको काम खासै प्रभावकारी देखिएका छैनन् । त्यसैले पनि निजी क्षेत्रसंगको सहकार्य गरिएको हो । जहाँसम्म काठमाडौंको संस्था भन्ने कुरा छ–हामीले चाहेर मात्र हुँदैन, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सूचना सार्वजनिक गरेर उक्त सूचना अनुसार सूचीकृत हुन आएका संस्थाहरुबाट छान्ने हो । सोही अनुसार सूचना सार्वजनिक गरेका थियौं । उक्त सूचनाको म्यादभित्र ५ वटा संस्था सूचीकृत हुन आए । ती मध्येबाट सबभन्दा कम कष्टमा जसले गर्नसक्छ । त्यसैलाई दिने हो । हामीले पनि त्यही गरेका हौं ।
– फोहोर बिसर्जन गर्न सक्ने खालको बिर्तामोड क्षेत्रमा ऐलानी जमिन कतै छैन ?
यो नगर यस्तो नगर हो जहाँ अलि ठूलो भू–भाग भएको जंगल र खोला क्षेत्र छैन । ऐलानी जग्गा भएका ठाउँमा बस्ती (सुकुम्बासी) बस्ती छ । बुझाई फरक भएका कारण पनि फोहोर व्यवस्थापन समस्या समाधान नभएको हो । त्यसमा पनि विर्तामोडको समस्या त अहिलेको मात्र होइन । जहाँ शहरीकरण हुन्छ त्यहाँ अवस्य पनि फोहोर बढ्छ नै । ३० औं वर्षदेखिको यो समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दल, विभिन्न सामाजिक संस्थाले फोहोरलाई मेजर होइन माइनर समस्याका रुपमा हेरेका छन् । फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन मेजर विषय बन्नै सकेन ।
–बिर्तामोडले फोहोरको समस्या कहिलेसम्म भोग्नुपर्ला ?
सबैको इच्छाशक्ति हुने हो भने तुरुन्तै हुन्छ । समस्याको समाधान गर्ने हामीले नै हो । दीर्घकालीन समाधान गर्न नसक्नु नगरको कमजोरी नै हो । हामी लागि रहेका छौं । खोजी गरिरहेका छौं ।
– तपाईसंग अपेक्षा राखेका नगरबासीलाई के भन्नुहुन्छ ?
बिर्तामोड नगरमा जम्मा तीनवटा काम गर्ने सोचेको थिए । पहिलो फोहोर व्यवस्थापन, ग्रिनबेल्ट र सिसी क्यामेरा जडान । ग्रिनबेल्ट सडक विभागले रोक्यो, फोहोर व्यवस्थापन सबैको मेजर विषय बन्न सकेन, बुझाई माइनर भयो । फोहोर व्यवस्थापनका लागि अघि पनि भने कार्यालयका तर्फबाट पनि पहल भइरहेको छ, जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दल, सामाजिक संघ–संस्था सबैसंग अनुरोध गरिरहेका छौं । फोहोर विर्सजनका लागि ठाउँ उपलब्ध गराएपछि फोहोर उठ्न सकेन भनेमात्र मेरो कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउनु होला भनेर यो नगर आउने वित्तिकै पनि भनेको छु । अहिले पनि त्यही हो ।
Previous articleबिर्तामोड नगरपालिकाको नगर विकास योजना पुस्तक सार्वजनिक
Next articleलेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसियसनको ३१ औं स्थापना दिवसमा विविध कार्यक्रम
बिबिधविर्तामोडको फोहोर व्यवस्थापन : ‘विषय मेजर, बुझाई माइनर’